शीर्षकमा बाइबल पदहरू: दया -> राम्रो चरित्र
राम्रो चरित्र: [दया]
१ कोरिन्थी १३:४-७
यसकारण परमेश्‍वरका चुनिएकाहरू, पवित्र र प्रिय भएर तिमीहरूले करुणा, दया, दीनता, नम्रता र धैर्य धारण गर।
योचाहिँ ख्रीष्‍ट येशूमा हामीप्रति उहाँको दयामा आफ्‍नो अनुग्रहको असीम सम्‍पत्ति आउँदा युगहरूमा देखाउनलाई हो।
तिम्रो भेटी त्‍यही वेदीको सामु छोड, र जाऊ। पहिले आफ्‍नो भाइसँग मिलाप गर, र त्‍यसपछि आएर आफ्‍नो भेटी चढ़ाऊ।
अथवा परमेश्‍वरको कृपाले तिमीलाई पश्‍चात्तापमा डोर्‍याउँछ भन्‍ने थाहा नपाएर, के तिमी उहाँको दया, सहनशीलता र धैर्यको प्रशस्‍ततालाई तुच्‍छ ठान्‍छौ?
धर्मी मानिसले मलाई हिर्काऊन्‌, त्‍यो त मेरो निम्‍ति दया हुनेछ। तिनले मलाई हप्‍काऊन्‌, त्‍यो मेरो शिरको निम्‍ति तेल हुनेछ। मेरो शिरले त्‍यो इन्‍कार गर्नेछैन। तापनि मेरो प्रार्थना सधैँ कुकर्मीहरूका विरुद्ध हुन्‍छ।
रीसको झोँकमा क्षणभरको निम्‍ति मैले मेरो मुख तँदेखि लुकाएको थिएँ, तर अनन्‍त प्रेम देखाएर म तँलाई कृपा गर्नेछु,” परमप्रभु तेरा उद्धारक भन्‍नुहुन्‍छ।
मानिसले अचूक प्रेमको चाहना गर्छ, झूटो बोल्‍नुभन्‍दा त गरीब हुनु नै बेस हो।
१ पत्रुस 4:8
२ पत्रुस 1:5-7
 यसैकारण सबै किसिमका प्रयत्‍नद्वारा तिमीहरूको विश्‍वासमा सद्‌गुण र सद्‌गुणमा ज्ञान थप, ज्ञानमा आत्‍मसंयम, आत्‍मसंयममा धैर्य, धैर्यमा भक्ति, भक्तिमा भातृ-स्‍नेह, भातृ-स्‍नेहमा प्रेम थप।
तिनलाई देखेर त्‍यो नपुंसक खुशी भयो, र एस्‍तरले त्‍यसबाट विशेष निगाह पाइन्‌। त्‍यसले तिनलाई तुरुन्‍तै खुशीसित सिङ्गारपटारका सामग्रीहरू र विशेष किसिमका खानेकुराको भाग जुटाइदियो। राजाको महलबाट सात जना चुनिएका सहेलीहरूलाई पनि त्‍यसले खटाइदियो। स्‍त्रीहरू बस्‍ने घरमा तिनलाई र तिनका सहेलीहरूलाई विशेष सुविधा पनि दिइयो।
जसरी परमेश्‍वरले ख्रीष्‍टमा तिमीहरूलाई क्षमा गर्नुभयो, त्‍यसरी नै एउटाले अर्कालाई क्षमा गरेर तिमीहरू एक-अर्काप्रति कोमल मनका र दयालु होओ।
यसकारण मौका पाएअनुसार हामी सबै मानिसको भलाइ गर्दैजाऔं, विशेष गरी तिनीहरूको, जो हाम्रो विश्‍वासका परिवारका हुन्‌।
तिनी बुद्धिसँग बोल्‍छिन्, र तिनको जिब्रोमा विश्‍वास योग्य उपदेश हुन्‍छ।
१ पत्रुस 3:9
 तब नाओमीले भनिन्, “परमप्रभुले तिनलाई आशिष्‌ देऊन्, परमप्रभुले जिउँदा र मरेकाहरूमाथि कृपा गर्न छोड्‌नुभएको छैन। किनभने ती मानिस त हाम्रा नजिकका कुटुम्‍ब, मोल तिरी छुटाउने हुन्‌।” तब मोआबी रूथले भनिन्, “त्‍यसबाहेक उहाँले त मलाई सबै कटनी खतम नहोउञ्‍जेल उहाँका मानिसहरूसँगै लागिरहनू भनी भन्‍नुभयो।”
तिनले भने, “हे मेरी छोरी, परमप्रभुले तिमीलाई आशिष्‌ देऊन्। तिमीले देखाएको यो आखिरी भक्ति पहिलाको भन्‍दा प्रगाढ़ छ। धनी कि गरीब कुनै जवान मानिसको पछि तिमी लागिनौ।
आज्ञापालन गर्न तिनीहरूले इन्‍कार गरे, र तिनीहरूका बीचमा तपाईंले गर्नुभएका आश्‍चर्यकर्महरूलाई तिनीहरूले यादै गरेनन्‌। तिनीहरू अटेरी भए, र आफ्‍नो दासत्‍वमा फेरि लैजान तिनीहरूले एक जना अगुवालाई नियुक्त गरे। तर तपाईं क्षमा गर्नुहुने परमेश्‍वर, अनुग्रही र कृपालु, रिसानीमा ढिला र प्रेमले पूर्ण हुनुहुन्‍छ। यसैले तिनीहरूलाई तपाईंले त्‍याग्‍नुभएन,
परमप्रभुको स्‍तुति होस्‌, किनकि म शत्रुहरूको घेरामा परेको सहरभित्र हुँदा उहाँले आफ्‍नो उदेकको कृपा ममाथि देखाउनुभयो।
 हे सबै जाति-जातिका मानिस हो, परमप्रभुको स्‍तुति गर। हे सबै जन हो, उहाँको जयजयकार गर। किनभने हामीप्रति उहाँको करुणा अपार छ। र परमप्रभुको विश्‍वसनीयता सदाको निम्‍ति रहन्‍छ। परमप्रभुको प्रशंसा गर।
तपाईंको अचूक कृपा मेरो निम्‍ति सान्‍त्‍वना होस्‌, यो आफ्‍नो दासलाई दिनुभएको प्रतिज्ञाअनुसार होस्‌।
पर्वतहरू हल्‍लाइए र डाँड़ाहरू हटाइए तापनि तेरो निम्‍ति मेरो अटूट प्रेम हटाइनेछैन, न त मेरो शान्‍तिको करार भङ्ग हुनेछ,” तँलाई कृपा गर्नुहुने परमप्रभु भन्‍नुहुन्‍छ।
“जा, र यरूशलेमले सुन्‍ने गरी यसो भनेर घोषणा गर: ‘तेरो युवावस्‍थाको भक्ति, दुलहीको जस्‍तो तेरो प्रेमलाई म सम्‍झन्‍छु, र कसरी तँ मेरो पछिपछि मरुभूमिमा हिँड़ेको थिइस्, त्‍यस बीउ नछरेको भूमिमा।
आफ्‍नो लुगा होइन, तर आफ्‍नो हृदय फटाएर परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्‍वरतिर फर्क, किनकि उहाँ अनुग्रहकारी, दयामा भरपूर, रीस गर्नमा ढीला र प्रेममा भरिपूर्ण हुनुहुन्‍छ, र विपत्ति ल्‍याउनुहुँदा उहाँ दु:खित हुनुहुन्‍छ।
 अनि तिनले परमप्रभुलाई यसो भनेर प्रार्थना गरे, “हे परमप्रभु, म आफ्‍नो घरमा छँदै के मैले यही कुरा भनेको थिइनँ र? यसैकारणले त तर्शीशमा भागेर जान मैले आतुरी गरेको थिएँ। तपाईं अनुग्रहकारी र करुणामय, रीस गर्नमा धैर्यवान्, दयामा प्रशस्‍त, र दु:ख दिनुमा बेखुशी हुनुहुने परमेश्‍वर हुनुहुन्‍छ भनी मैले जानेको थिएँ। अब हे परमेश्‍वर, मेरो प्राण लिनुहोस्, किनभने मेरो निम्‍ति बाँच्‍नुभन्‍दा त मर्नु नै असल छ।”
त्‍यहाँका बासिन्‍दाहरूले हामीलाई अपूर्व दया देखाए। पानी परेर जाडो भएको कारणले तिनीहरूले आगो बालिदिए, र हामी सबैलाई स्‍वागत गरे।
यसैले यसो होस्‌: जुन कन्‍यालाई म ‘तिम्रो गाग्रो मतिर पानी पिउनलाई ढल्‍काइदेऊ’ भनुँला, र जसले मलाई ‘खानुहोस्, म तपाईंका ऊँटहरूलाई पनि खुवाइदिन्‍छु’ भन्‍छिन्, तिनलाई नै तपाईंले आफ्‍ना दास इसहाकको निम्‍ति रोज्‍नुभएको होस्‌। तपाईंले मेरा मालिकलाई दया देखाउनुभएको रहेछ भन्‍ने म त्‍यसैबाट थाहा पाउनेछु।”
यसकारण अब म तपाईंहरूलाई बिन्‍ती गर्दछु, कि मैले तपाईंहरूमाथि दया देखाएकी हुनाले मसँग परमप्रभुको शपथ खानुहोस्, मेरा परिवारप्रति पनि दया देखाउनुहोस्‌। मलाई एउटा निश्‍चित चिन्‍ह दिनुहोस्,
२ कोरिन्थी ६:६
शुद्धतामा, ज्ञानमा, धैर्यमा, दयामा, पवित्र आत्‍मामा, साँचो प्रेममा,
तर जब परमेश्‍वर हाम्रा मुक्तिदाताको भलाइ र प्रेम प्रकट भयो,
अनि त्‍यसले मनमनै प्रार्थना गर्‍यो, “हे मेरा मालिकका परमप्रभु परमेश्‍वर, कृपा गरी आज मलाई मेरो काम सफल गराइदिनुहोस्‌ र मेरा मालिक अब्राहामलाई आफ्‍नो दया देखाउनुहोस्‌।